HGH oo miisaanka ku dhuftey Thailand Isticmaal hoormoonka koritaanka bini'aadamka ee dufanka luntay
Hormoonka koritaanka (somatotropin, HGH) Dadka intooda ugu badan Thailand waxay ku xiran yihiin hababka dheelitirka cayaaraha. Habka ay tahay - HGH waxay leedahay saameyn xoog leh oo ah anabolic, dhiirigelinta koritaanka murqaha, waxay xoojisaa nidaamka difaaca waxayna xitaa sababtaa saameynta wadarta guud ee dhalashada. Fursadahaas oo laga yaabo in la yareeyo dufanka jidhka ayaa badanaa lumay aragtida, laakiin maahsan - hormoonka koritaanka si uu u gubo boogo dheeraad ah oo weyn.
Tusaale ahaan, waxaad u jeedin kartaa daraasadda Jaamacadda Bangkok ee 1998, oo dadka waaweyn ee 24 ay heleen qiyaasta maalin kasta ee 2 mg - 5 mg HGH muddo lix bilood ah. Inta lagu jiro muddadaa jirkooda jirkoodu hoos uma dhicin, laakiin saamiga u dhexeeya muruqyada iyo unugyada adipose ayaa isbedelay - celcelis ahaan, ka qaybgale kasta wuxuu helay xaddiga 5.5 ee murqaha iyo, ugu muhiimsan, lumay 5.7 oo dufan ah. Iyo luminta dufanka ugu weyn ayaa lagu arkay caloosha. Lama yaabin markii ugu danbeysay ee ay ahayd daawooyinka sida Genotropin, jintropin iyo ansomone iyo hormoonada hormoonnada daawooyinka kale ee loogu talagalay ciyaaro badan oo doonaya in ay yareeyaan boqolkiiba baruurta jirka.
Sidee hormoonka koritaanka loogu talagalay miisaan lumis?
Qayb wayn oo ka mid ah guryaha baruurta ee HGH waxay la xidhiidhaan saamaynta ay ku leeyihiin dheef-shiid kiimikaadka. Metabolism, Waxaa si fiican loo yaqaanaa in ku dhawaad ​​unug kasta oo jidhka bini'aadamku ku shaqeeyo either asal asli ama glucose. Haddii xaddiga gulukooska ee dhiigga lagu xakameeyo hormoonka insulin-ta anomalaysan, xaddiga dufanka cad ee hormoonka koritaanka. Hadafka aad rabto inaad ku guuleysato miisaan lumis iyo yaraanta baruurta, waa inaad ku qasabtaa unugyada in ay cunaan dufan ka badan gulukooska. Insulin ma aha jawaabta - waxay kudheeraataa gulukoosta heer caadi ah waxayna ku dukaataa dhadhanka. Xaalad waliba, waxay sababtaa unugyada si ay u cunaan sokorowga, ee aan baruurta lahayn, isla mar ahaantaana sii kordhinaysa astaamaha dufanka ee beerka.
Laakiin HGH waa nooc ka mid ah antagonistaha insulin, ayaa isku dayaya in ay yareeyaan isticmaalka gulukooska unugyada waxayna ku qasbeysaa in ay cuno asiidh dufan ah. Si arrintan loo sameeyo, waxa ay ku jirtaa xuubka unugyada baruurta waxayna u adeegtaa habka gaadiidka kaas oo ka qaadi kara asiidh cad, iyaga oo keena dhiig, oo siinaya oksijiinka. Si kale haddii loo dhigo, waxa ay noqotaa habka lipolysis, sida hoos u dhigidda tirada unugyada baruurta. Tan ugu muhiimsan, unugyada kansarka ee HGH kaliya ma bixin doonaan waxyaabaheeda oo aan la burburin. Laakiin haddii unugyada jidhku u baahan doonaan astaamaha dufan badan, iyo burburinta unugyada baruurta oo hoos yimaada ficilka hormoonka koritaanka kororka, iyo abaabulinta dufanka ka soo baxa kaydka ayaa kor u kici doona, taas oo keeni doonta miisaan lumis ah. Haddii aad dhab ahaantii rabto inaad soo koobto, jidhku wuxuu bilaabaa inuu cuno baruurtiisa. Tani marka hore, ugu horeyntii, waxaad u baahan tahay qadar ku filan hormoonka koritaanka.
Inta lagu jiro koorsada miisaanka ugu fiican waxaa lagula talinayaa in la cabo iyo miisaanka kale ee lumo - hormoonka koritaanka inta badan kuma dhexmari jirin midkood. Gaar ahaan waa fiican ee hoormoonka tayroodhka, tusaale ahaan thyroxine (100-150 μg maalin kasta) ama triiodotyronine (25 μg maalin kasta). Ma aha oo kaliya inay dufanayaan naftooda, laakiin sidoo kale saameyn faa'iido leh ee qanjirka thyroid. Horumarka hormoonada koritaanka waxay u baahan tahay - HGH waxay joojisaa shaqadeeda waxayna xitaa u horseedi kartaa korodhkeeda, sidaas darteed hormoonka thyroid inta lagu guda jiro waqtigan waxay gacan ka geysaneysaa in la yareeyo muujinta saameynta ay keeni karto.
Xaqiiqdii, HGH waa dabiiciga jidhka. Tusaale ahaan, da'da, mugga "mug" ee bini-aadanka ayaa hoos loo dhigaa, si dib-ugu-soo-celinta helitaanka HGH-ka dibadda waxay u muuqataa dhacdo aan waxyeello aheyn, dhammaantiisuna markaa aan lagu xakamaynin hormoonka jidhka. Tani waa saameynta ugu yar ee HGH. Waxaa badanaa la barbardhigi karaa steroids (saameyntu way la mid tahay, waxayna isticmaashaa kooxo isku mid ah), laakiin ma saameyneyso wax soo saarka hoormoonka galmada, sababtuna tahay ficil fara badan oo ficil ah ayaa leh waxyeello aan fiicneyn. Sidoo kale ka dib marka hormoonka hormoonka kondomka aan looga baahneyn daaweynta ka dib, wuxuu sidoo kale ka sheegaa ammaanka.
Dalka Thailand waxaa jira khuraafaad ah in isticmaalka hoormoonka koritaanka ee miisaankiisu uu keeno kororka dhagaha, sanka, dhabannada, carrabka, carjawda, lafaha (oo muuqaalka muuqaalka ah ee kuuskuuska ah ee meelaha ku xiran xubnaha taranka), wadnaha iyo xubno kale oo gudaha ah (tusaale ahaan la siiyo "xubnaha jidhka ee uurka leh" waa cayaaraha xirfadlayaasha ah ee jidhkooda koray iyo hadda u muuqda calool-xumo). Dhammaan arrintani way dhici kartaa, laakiin markaad isticmaasho daroogada oo aad uga badan tahay qiyaasta daawada lagu taliyey. Isticmaalka caadiga ah ee HGH si miisaan lumis la mid ah oo aan la mid ahayn.